Mashiinka Buuxinta Biyaha, Mashiinka Buuxinta Mashiinka, Khadka Buuxinta Kulyada Casiirka - Higee
Khadka Tooska ah Nooca Mashiinka Buuxinta Kiimikada
Khadka Mashiinka Buuxinta Shaambo otomaatig ah
Khadka Mashiinka Buuxinta Awoodda Sare
Nidaamka daweynta biyaha
Mashiinka Mashiinka Buuxinta kulul ee PET
Iyada oo xoog & R & D iyo karti wax soo saar loo dhoofiyo 100 + waddan noocyo kaladuwan oo buuxin iyo baakidh wax soo saar ee Cuntada, Cabitaanka, Daawooyinka, Cosmetics iwm Warshadaha.
Tayada wax soo saarka
Waxaan ku dhiseynaa mashiinkeena qaybo caan ah iyo qalab tayo wanaagsan leh. Waxaan leenahay xakameyn adag oo QC ah si aan u siino mashiin tayo leh sumcad wanaagsan gudaha iyo dibaddaba. Tayada waa dhaqankeena.
Kaliya kuma ahan Buuxinta Buuxinta, Qorista iyo Mashiinka Baakadaha, waxaan u fidinaa hal adeeg oo joogsi macaamiisha ah oo ay ku jiraan mashiinka dhalada afuufa, nidaamka daaweynta biyaha iwm.
Waxaan haynaa koox injineernimo farsamo oo adag iyo kooxda iibinta Global oo leh adeeg luqado badan ku saabsan iibka ka hor iyo ka dib iibka. Sidoo kale khibrad nadiifin kastam.
Warshadaha Kiimikada Maalinlaha ah
Wararkii Ugu Dambeeyay & Qoraallada
Macaamiil kastaa wuxuu rabaa inuu helo mashiin buuxinta iyo mashiinka calaamadeynta wax soo saarka baakadeynta. Khibraddeenna, waxaan awood u leenahay inaan helno xalka ugu fiican ee lagu daboolayo baahiyahaaga. Waxaan ku tusi doonaa tilmaamaha farsamada qaarkood & qoraallada cusub ee mashruuca ama wararka halkan si aan wax badan kaaga ogeysiiyo.
Intii lagu gudajiray Shirweynihii 2aad ee Caalamiga ah ee Soo Dejinta Shiinaha bishii Nofeembar, wafdiga Afrikaanka ah ee 2019 ayaa yimid Sh ...
Waa maxay faa'iidada iyo faa'iido darrada PLA ...
Iyada oo ku saleysan arrinta kala-goynta qashinka, qiimaha iyo ilaalinta deegaanka, waa dhalada PLA ...
hadlay iyo meel go'an
wuxuu ku kala duwan yahay nooca suunka rullaluistemadka iyo nooca meel go'an loogu talagalay calaamadeynta dhalada wareega inta badan timirta ...
Sida loo helo kalsoonida macaamiisha marka hore ...
Mashiinka warshadaha ee laga iibsanayo macaamiisha ajaanibta ah, waa kuwee qodobada ugu badan ee la soo dhoofiyo ...